Ndeipi Yakaenzana Webhu Peji Hupamhi? | Martech Zone
Kugadzira webhusaiti uye kumisikidza iyo peji rehupamhi kusvika pahupamhi hupamhi hurukuro inofanirwa kuve nayo. Vazhinji venyu makaona kuti ini nguva pfupi yadarika ndachinja hupamhi hwebhurogu rangu dhizaini. Ini ndakasundira iyo upamhi hwepeji kunze kusvika gumi nemazana mapikiseli. Vamwe venyu vangangopokana nekutama - asi ini ndaida kugovana mamwe matanho uye zvikonzero nei ndakasundira iwo upamhi hwedingindira zvakanyanya.
1048 pixels yanga isiri nhamba yakasarudzika, zvakadaro.
Paive nezvakakosha zviviri mukuwedzera peji yangu upamhi:
Youtube inopa hukuru hwakakura hwekusimbisa izvozvi. Ukabaya diki giya padivi peiyo peji yevhidhiyo yeYouTube, iwe unopihwa sarudzo dzehukuru hukuru pamwe nemusoro wenyaya. Sezvo emhando yepamusoro mavhidhiyo ari kuve anozivikanwa nzvimbo paYouTube, ini ndaida kuisa iwo mavhidhiyo mubhurogu yangu uye ndovaratidza iwo nezvakawanda zvandaigona (ndisingapedze iro rese peji upamhi).
Kujairika kushambadzira kunouya muhupamhi hwe 125, 250 uye 300 pixel upamhi. Pixels mazana matatu anoita kunge ari kubuda nekunowanda pamasaiti emari ekushambadzira uye ini ndaida kuzvisanganisa zvakanakisa padivi rangu.
Uye zvechokwadi, kune kumwe kunamira kuruboshwe uye kurudyi kwepeji, zvirimo, uye padivi ... saka mashiripiti nhamba yaive 1048 pixels yenyaya yangu:
Ndakaongorora kuverenga kuverenga kwangu here?
Ehe saizvozvo! Dai vazhinji vevashanyi vangu vaimhanya yakaderera resolution skrini, ini ndaizonyatso kuve nepfungwa dzechipiri nezvekuwedzera peji rangu.
Mushure mekuburitsa zvisarudzo zvescreen kubva pasuru yangu yeAnalytics (MuGoogle vashanyi> Browser Kugona> Screen Resolutions), ini ndakavaka Excel spreadsheet yemhedzisiro uye ndikaburitsa upamhi kubva padanho rekugadzirisa.
Google inopa resolution se1600 × 1200, saka unofanirwa kutora zvese kubva kuruboshwe kwe "x", wobva waipamhidzira na1 kuti ive mhedzisiro kuitira kuti ugone kusiyira pairi, wozoita SUMIF uone kuti kangani kushanya yakakura kudarika kana kushoma pane dhizaini dhizaini yauri kutarisa.
= BASA (A2, TSVAKA ("x", A2,1) -1) * 1
Ini ndakasiya iyo 22% yevaverengi vari kuita diki resolution? Chokwadika kwete! Chinhu cheNice nezve dhizaini nezvako zvemukati zvakasara uye rako repadivi kurudyi nderekuti iwe unogona kuona kuti zvemukati zvako zvichiri mukati mehupamhi hweruzhinji rwevabhurawuza. Mune ino kesi, 99% yevaverengi vangu vari kumhanya kupfuura mazana matanhatu emazana pixels, saka ini ndakanaka! Handidi kuti vasarasikirwe zvachose neparutivi, asi izvo zviri zvechipiri kune izvo zvirimo.
Tags: aclarkautoresponderChrisVankutonhora kudanaemail anopindurakylelacylinkedin adskukurudzira mushandirapamwekutengesa crmkutengesa kutsvagakutengesa kutsvaga kwekushandisapasocial ads
Ndeipi iyo ROI pane Musoro wemusoro?
Jun 8, 2009 pa7: 20AM
Ini ndinoratidzira kurongedzwa kwemasanganiswa uye CSS mudziyo upamhi hwe100%. Chero bedzi iwe uine upamhi hwakagadzika hwebara repadivi, musoro, tsoka, uye nzvimbo huru dzemukati dzinozoenderana kuti dzikwane hupamhi hwasara hwechidzitiro. Inozadza 100% yewese browser yewindo, zvisinei nemushandisi wekutarisa resolution Ipapo iwe haufanire kuverenga mapikisheni zvakare kana kuchengetedza nhamba yemushandisi maererano nesarudzo yekutarisa.
Jun 8, 2009 pa 12: 22 PM
Ini ndinoda chaizvo masystem akaomeswa, Bob - asi zvinosuwisa kuti havatambe zvakanaka dzimwe nguva nezvazviri chaizvo. Pamwe ndine nungo, asi zviri nyore kwandiri kuti ndizive kuti max uye min ari 640px mune yangu saiti. Kutambanudza kunonetsa kubata pamuviri pandiri kunyora zvinyorwa.
Kungoda zvaunofarira ndinofungidzira!
Jun 8, 2009 pa 12: 17 PM
Chaizvoizvo, ndinobvumirana nemhedziso yako, asi kana ndiri kushandisa yakagadziriswa upamhi set-up, ini ndinogumira iyo upamhi kusvika mazana mapfumbamwe ema pixels.
Mumwe anofanirwa kuzvidavirira yekutwasuka scroll bar uye mamwe mabrowser mapfupi mabara anotora akawedzera upamhi. Nekugara mukati memapikisheni mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe, mumwe anovimbiswa kuti hapana kuruboshwe-kuruboshwe kurudyi pane 960 pixel-wide screen resolution.
Kutenda neichi posvo Doug. Ndiri kushanda pane nyowani (yakafara) dhizaini yeiyo Indiana Insider blog uye iyi posvo ndizvo chaizvo zvandaida!
Jul 13, 2009 pa 4: 35 AM
zvisingaite. MuFirefox, saiti yako ine scroll scroll yakatwasuka pa1048, uye haina chitarisiko chakachena kudzamara wabuda kuenda ku1090.
Kutenda nematanho makuru kunyangwe kubva kuGoogle resolution
Sep 2, 2009 na3: 03 PM
Sezvo iwe uine yako kumisikidzwa ku1048px, yako saiti inokonzeresa yakatwasuka scroll scroll pane 1024 skrini. Ini ndinofunga zvaive zvirinani kutsvaira 100px kubva paupamhi (uye padding) yebara rako repadivi nenzvimbo yemukati saka inokwana pane 728 × 1024. Ndiwo maitiro akanakisa nhasi.
Mhosva chete inopokana neiyi ingave kana iyo analytics nhamba ichiitsigira… asi sezvo iwe usina kupa iyo data muchinyorwa chako, ndingati iwe uri peji dhizaini ine kukanganisa.
Nov 24, 2009 pa12: 51AM
Ini zvino ndine 15 'yekutarisisa ine 1024 × 768 resolution, ini ndinoona yakatwasuka bhaa, uye ndinoivenga.
Haasi munhu wese anoshandisa hwindo rese pazere skrini - kutaura zvazviri, ini ndaizobheja izvo vashoma vanozviita.
Ndine bhurogu yako mune 80% windo… uye ndizvozvo, yakatwasuka scroll bar
Uye chii chiri kunze kwescreen… lets see… nothing.
Saka yako scroll bar haina musoro.
Imwe nzira iri nyore yekurasikirwa nevaverengi !!
Kukadzi 28, 2012 na1: 49 PM
Izvo zvemukati zviri mukati me peji @ heenan73: disqus, ichipa muverengi izvo chaizvo zvavanoda. Kana ndiri kurasikirwa nevaverengi nekuti ivo vese vanogona kuona izvo zvirimo uye voona yakatwasuka scrollbar… vasina chokwadi kuti vaive vaverengi vandiri kutsvaga. Pane chaicho chakasarudzika mukati medu zvemukati chinoisundira kunze kuenda ku1217px saka ndiri kuenda kuchiteedzera icho pasi nekuchigadzirisa. Iyi posvo yaive yakanyorwa chaizvo nezve yapfuura theme. Ndatenda nekuunza izvi kwandiri!